Kedu otu anyị ga-esi kwekọọ ọbụbụeze Chineke na nnwere onwe ime nhọrọ? | AKWURKWỌ AKWCHKWỌ
Kedu otu anyị ga-esi kwekọọ ọbụbụeze Chineke na nnwere onwe ime nhọrọ?
E dere ọtụtụ okwu banyere ọbụbụeze Chineke, ikekwe ọ bụkwa otu ihe ahụ ka e dere banyere nnwere onwe ime nhọrọ nke mmadụ. Ọtụtụ dị ka ha kwenyere na Chineke bụ Ọkaakaa, ma ọ dịghị ihe ọzọ ruo n'ókè ụfọdụ. Ọ na-adịkarị ka ọtụtụ ndị kwetakwara na ụmụ mmadụ nwere, ma ọ bụ ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, inwe ikike ime nhọrọ. Mana enwere otutu okwu banyere oke ọbụbụeze na nnwere onwe ime nhọrọ, yana ndakọrịta nke abụọ ndị a.
Isiokwu a ga-agba mbọ ịkọwapụta ọbụbụeze Chineke na nnwere onwe nnwere onwe nke mmadụ n'ụzọ nke kwesịrị ntụkwasị obi nye Akwụkwọ Nsọ ma kwekọọ na ibe ya.
Gịnị bụ ọbụbụeze?
Akwụkwọ ọkọwa okwu na-akọwa ọbụbụeze dị ka "ikike kachasị elu ma ọ bụ ikike". A ga-ewere eze nke na-achị mba dị ka onye na-achị mba ahụ, onye na-agaghị aza onye ọ bụla ajụjụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ mba ole na ole na-achị taa, ọ bụ ihe a na-ahụkarị n’oge ochie.
Ọ bụ onye ọchịchị n’ikpeazụ na-ahụ maka ịkọwa na ịmanye iwu na-achịkwa ndụ n’ime obodo ha. Enwere ike itinye iwu na ọkwa gọọmentị dị ala, mana iwu onye na-achị achị kacha wee nwee iwu karịa nke ọ bụla ọzọ. A ga-ekenye ndị mmanye iwu na ntaramahụhụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Ma ọ bụ onye ọchịchị ka ikike ime ihe dị otú ahụ dị n'aka.
Ugboro ugboro, Akwụkwọ Nsọ na-eme ka a mata na Chineke bụ Ọkaakaa. Akpan akpan ịchọtara ya na Ezikiel ebe akpọrọ ya "Ọkaakaa Onyenwe anyị" ugboro 210. Ọ bụ ezie na Akwụkwọ Nsọ na-anọchite anya ndụmọdụ oge ụfọdụ, ọ bụ naanị Chineke na-achịkwa okike ya.
N’ime akwụkwọ site n’Ọpụpụ rue Diuterọnọmi, anyị na-ahụ usoro iwu nke Chineke nyere Israel site n’aka Mosis. Ma edekwara iwu omume nke Chineke n'ime obi mmadu nile (Ndi Rom 2: 14-15). Deuterọnọmi, ya na ndị amụma niile, mere ka o doo anya na Chineke ga-aza anyị ajụjụ maka irubere iwu ya isi. N'otu aka ahụ, enwere nsonaazụ ọ bụrụ na anyị erubereghị echiche ya isi. Ọ bụ ezie na Chineke nyefere ọrụ ụfọdụ n’aka ọchịchị ụmụ mmadụ (Ndị Rom 13: 1-7), ọ ka bụ Ọkaakaa.
Ndi ukara edi ndikara ofụri ekondo?
Otu ajụjụ na-ekewa ndị na-anaghị erubere ọchịchị Chineke isi gbasara otú ọ ga-esi achị mmadụ n’aka. Kwere omume na Chineke bụ Ọkaakaa ma ọ bụrụ na ndị mmadụ emee ihe megidere uche ya?
N'otu aka, enwere ndị ga-agọnahụ nke a. Ha ga-asị na ọbụbụeze Chineke pere ezigbo mpe ma ọ bụrụ na ọ nweghị oke ịchịkwa ihe niile na-eme. Ihe nile aghaghi ime dika o zubere.
N'aka nke ọzọ, ha bụ ndị ga-aghọta na Chineke, n'ọchịchị ya, enyela ụmụ mmadụ ikike ịchị onwe ha. “Nnwere onwe ime nhọrọ” a na-eme ka ihe a kpọrọ mmadụ na-eme ihe n'ụzọ megidere ụzọ Chineke pụrụ isi chọọ ka ha mee. Ọ bụghị na Chineke enweghị ike ịkwụsị ha. Kama, o nyere anyị ikike ka anyị mee ka anyị. Otú ọ dị, ọ bụrụgodị na anyị emee ihe megidere uche Chineke, nzube ya n'okike ga-emezu. Onweghi ihe anyị nwere ike ime iji gbochie nzube ya.
Olee echiche ziri ezi? N’ime akwụkwọ nsọ niile, e nwere ndị mere ihe megidere iwu Chineke nyere ha. Akwụkwọ Nsọ gara n’iru n’arụ ụka na ọdịghị onye ọzọ ma ọbụghị Jizọs bụ ezi onye, ​​onye na-eme ihe Chukwu chọrọ (Ndị Rom 3: 10-20). Bible na-akọwa ụwa nke na-enupụ isi megide onye kere ha. Nke a dị iche na Chineke bụ onye na-achịkwa ihe niile na-eme. Ọ gwụla ma ndị na-enupụ isi megide ya na-eme ya n'ihi na ọ bụ uche Chineke maka ha.
Chee echiche banyere ọbụbụeze anyị maara nke ọma: ọbụbụeze nke eze ụwa. Onye ọchịchị a nwere ọrụ maka ịkwado na itinye iwu nke alaeze ahụ. Eziokwu ahụ bụ́ na ndị mmadụ mgbe ụfọdụ na-emebi iwu o guzobere nke alaeze emeghị ka ọ ghara ịbụkwa onye nwe ala. Ndị ọ na-achị enweghịkwa ike imebi iwu ndị ahụ na ntaramahụhụ. Enwere nsonaazụ ọ bụla ma ọ bụrụ na mmadụ emee ụzọ megidere ọchịchọ onye ọchịchị.
Echiche atọ nke nnwere onwe ime nhọrọ nke mmadụ
Nnwere onwe ime nhọrọ na-enye ikike ime nhọrọ n'ime ụfọdụ ihe mgbochi. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịhọrọ site na ọnụọgụ nhọrọ ole na ole ihe m ga-eri nri abalị. Enwere m ike ịhọrọ ma m ga-erubere oke ịgba ọsọ. Ma enweghị m ike ịhọrọ ime ihe megidere iwu anụ ahụ nke ihe okike. Enweghị m nhọrọ ma ike ndọda ga-adọkpụrụ m n'ala mgbe m si na windo wụpụ. Enweghị m ike ịhọrọ ipupụta nku ma fee.
Otu ìgwè mmadụ ga-agọnahụ na anyị nwere nnwere onwe ime nhọrọ. Nnwere onwe ime nhọrọ ahụ bụ nanị echiche efu. Ọnọdụ a bụ mkpebi siri ike, na oge ọ bụla nke akụkọ ntolite m na-achịkwa iwu ndị na-achịkwa eluigwe na ala, mkpụrụ ndụ ihe nketa na gburugburu ebe obibi m. Mkpebi nke Chukwu ga-eme ka a mata Chineke dị ka onye na-ekpebi ụdị nhọrọ m na omume m niile.
Echiche nke abụọ na-egosi na nnwere onwe ime nhọrọ dị, n’otu echiche. Echiche a bụ na Chineke na-arụ ọrụ n'ọnọdụ nke ndụ m iji hụ na m na-eme nhọrọ nke Chineke chọrọ ka m mee. Echiche a na-akpọkarị ndakọrịta n'ihi na ọ dabara na echiche siri ike banyere ọbụbụeze. Ma odi nkpa ka odi iche na nkpepu nke Chineke dika ndi mmadu na eme ihe ndi Chineke choro n’aka ha.
Atọ nke uche nke a na-akpọkarị libertarian free uche. A na-akọwapụta ọnọdụ a dị ka ikike ịhọrọ ihe ọzọ karịa ihe ị mechara mee. A na-akatọkarị echiche a dị ka nke na-ekwekọghị n’ọchịchị Chineke n’ihi na ọ na-enye mmadụ ohere ime ihe megidere uche Chineke.
Dika edere ya n'elu, otu odi, akwukwo nso mere ka oputa ihe na madu bu ndi nmehie, neme ihe dika ihe Chineke mekpughere. Ma ọ dịkarịa ala site na Akwụkwọ Nsọ ọ na-egosi na ụmụ mmadụ nwere nnwere onwe nnwere onwe ime nhọrọ.
Echiche abụọ banyere ọbụbụeze na nnwere onwe ime nhọrọ
E nwere ụzọ abụọ ọchịchị mmadụ na nnwere onwe ime nhọrọ nke mmadụ nwere ike isi dị n’udo. Nke mbụ rụrụ ụka na Chineke nwere ikike zuru ezu. Na ọ dịghị ihe na-eme ma e wezụga ntụzịaka ya. N'uche a, nnwere onwe ime nhọrọ bụ nrọ ma ọ bụ ihe amatara dịka nnwere onwe nnwere onwe - nnwere onwe ime nhọrọ nke anyị ji aka anyị eme nhọrọ ndị Chineke mere maka anyị.
Zọ nke abụọ ha ga-esi dịghachi ná mma bụ ịhụ ọbụbụeze Chineke site n’ịgbakwụnye ihe na-enye ohere. N'ọchịchị Chineke, ọ na-enye anyị ohere ịhọrọ nhọrọ (ma ọ dịghị ihe ọzọ n'ókè ụfọdụ). Echiche a banyere ọbụbụeze kwekọrọ na nnwere onwe nnwere onwe ime nhọrọ.
Ya mere, n’ime mmadụ abụọ a, olee nke ziri ezi? Ọ dị m ka otu nkata dị nkenke Akwụkwọ Nsọ bụ nnupụisi ụmụ mmadụ megide Chineke na ọrụ ya iji wetara anyị mgbapụta. O nweghi ebe obula ekpughere dika Chineke.
Mana n’uwa nile, egosiputara mmadu dika nke megidere uche Chineke ekpughere. N'ozuzu anyị họọrọ ịga nke aka anyị. Ọ na-esiri m ike ijikọta ọdịdị nke Akwụkwọ Nsọ nke mmadụ na ụdị ọ bụla nke mkpebi Chineke. Ime nke a ga-eyi ka ọ̀ bụ Chineke ga-eme ka anyị na-enupụrụ ya isi. Ọ ga-achọ uche nzuzo nke Chineke nke megidere uche ya nke ekpughere.
Ime ka ọbụbụeze na nnwere onwe ime nhọrọ kwekọọ
Ọ gaghị ekwe omume anyị ịghọta n'ụzọ zuru ezu ọbụbụeze nke Chineke na-enweghị nsọtụ. Ọ dị elu karịa anyị maka ihe ọ bụla dị ka nghọta zuru oke. Ma ayi ka emeworo n'onyinyo-ya, n bearingyiyi oyiyi-ya. Ya mere, mgbe anyị chọrọ ịghọta ịhụnanya, ịdị mma, ezi omume, ebere, na ọbụbụeze nke Chineke, nghọta ụmụ mmadụ anyị nwere banyere echiche ndị ahụ kwesịrị ịbụ ntụkwasị obi, ma ọ bụrụ na ọ nwere oke.
Yabụ ezie na ọbụbụeze mmadụ nwere oke karịa ọbụbụeze Chineke, ekwenyere m na anyị nwere ike iji nke ahụ ghọta nke ọzọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ihe anyị maara banyere ọbụbụeze mmadụ bụ ihe nduzi kasị mma anyị nwere iji ghọta ọbụbụeze Chineke.
Cheta na ọ bụ onye ọchịchị nke mmadụ ga-ahụ maka ịmepụta na itinye iwu nke na-achị alaeze ya aka. Otú ahụ ka Chineke na-emekwa. Ọ na-eme ma na-ekpe ikpe ọ bụla megidere iwu ndị ahụ.
N'okpuru onye ọchịchị nke mmadụ, ndị nweere onwe ha ịgbaso ma ọ bụ nupụrụ iwu ndị onye ọchịchị na-achị isi. Ma inupụrụ iwu isi na-efu ihe. N'ebe onye ọchịchị nke mmadụ nọ, ọ ga-ekwe omume na ị ga-emebi iwu na-ejideghị ya wee kwụọ ntaramahụhụ. Ma nke a agaghị abụ eziokwu n’ebe onye ọchịchị nọ maara ihe niile ma na-ekpe ikpe ziri ezi. A ga-amata ma taa ntaramahụhụ ọ bụla.
Eziokwu ahụ bụ́ na ndị ọ na-achị nweere onwe ha imebi iwu eze adịghị ebelata ọbụbụeze ya. N'otu aka ahụ, eziokwu ahụ bụ́ na anyị onwe anyị bụ ndị nweere onwe anyị imebi iwu Chineke adịghị ebelata ọbụbụeze ya. Ebe m nwere ọchịchị onye ọchịchị, nnupụisi m nwere ike imebi ụfọdụ atụmatụ onye na-achị obodo. Mana nke a agaghị abụ eziokwu maka onye ọchịchị maara ihe niile na onye nwere ikike ime ihe niile. Ọ gaara amata nnupụisi m tupu ya emee, ọ gaara ekpebi ime ya ka o nwee ike mezuo nzube ya n’agbụ m.
Nke a yikwara ka ọ bụ ụkpụrụ ahụ edepụtara n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Chineke bụ Ọkaakaa ma ọ bụ isi iyi nke ụkpụrụ omume anyị. Anyị onwe anyị, dị ka ndị ọ na-achị, na-eso ma ọ bụ na-enupụ isi. Enwere ụgwọ maka nrubeisi. Maka nnupụisi enwere ntaramahụhụ. Ma njikere ọ dị ikwe ka anyị nupụrụ isi adịghị ebelata ọbụbụeze ya.
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ amaokwu ndị ga-eyi ka ọ ga-akwado mkpebi mkpebi iji aka nke nnwere onwe ime nhọrọ, Akwụkwọ Nsọ n'ozuzu ya na-akụzi na, ebe Chineke bụ Ọkaakaa, ụmụ mmadụ nwere nnwere onwe ime nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịhọrọ ime ihe n'ụzọ megidere uche Chukwu maka anyi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nzukọ nke taa 16 Septemba 2020 nke San Bernardo
Next Post → Post ozo:Tugharia uche na nmehie gi ta